အယ်ဒီတာ လက်ရွေးစင် မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ် – The Art Garden Rohingya
Monthly top poems
အယ်ဒီတာ လက်ရွေးစင် မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ်
Sep 11, 2021 AGR Monthly top poems
အယ်ဒီတာ လက်ရွေးစင် မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ် ၊ သြဂုတ – ၂၀၂၁ ။
” မိုးရာသီအလွမ်း ”
– ဆရာ ဦးအဗ်ဒုလ်ဟာမိဒ်
အစားအ သောက် အလုပ် အကိုင်
သူ့စိတ်နှလုံးရဲ့ ကြောက် စရာ ကောင်းတဲ့
တုပတဲ့ အချစ် ဟန် ကို
အကဲမခတ် နိုင် လို့တဲ့…။
ကိုယ့်အရင်းမြစ်ပါ စွန့်လွှတ် ခဲ့ပါ၏
အစစအရာရာ သူ့တွက် ပေးဆပ် ငြားလည်း
အ ကြွေး ပြန် ဆပ် လာ ရက်တယ်…။
အော် …သူ့တုပတဲ့ အချစ် ဟန် ကို
ဘဝတစ် သက် ကိစ္စတိုင်းမှာ
ကိုယ့် လိုအပ်ချက်ဟာ လုံးလုံးလျားလျား
ဖြစ် ရပ် သည် ကား….
လက် ဗလာသူ ဌေးဟန် မှ ငွေ ချေး တောင်းသည့်ပမာ။
ဒါ တွေဟာ ‌မမျှော်သင့်တဲ့
ဖုန်းဘေလ် နည်းလို့ ငွေ ချေးထား၏
ဖုန်းအားနည်းလို့ အားမ ဖြည့်ရ၏
ရင် ဖွင့်စကား ချိုချိုသာသာ
အပြန် အလှန် ရှယ် ယာနိုင် ရန် …။
နေ့စဉ် နေ့တိုင်း တစ် ရက် ပတ် လုံး
အချိန် သာကုန် လူသာပင် ပန်း
`ဟယ် လို´တစ် ခွန်းက ရောက် မလာတည်း….။
ကိုယ့် ဘဝတစ် လျှောက် လုံးအား
တိုက်ထနစ်လို မ နစ်မြုပ်ပါစေနဲ့…။
” ရို-ကမ္ဘာပျက်သည့်နေ့ “
သြော် … ရိုဘဝ၊ ရိုကံကြမ္မာ
ဟို…၂၀၁၇ သြဂုတ် ၊ ၂၅ ရက်
“ရိုဟင်ဂျာ” အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးသည့်နေ့…
“ရိုဟင်ဂျာ” ကမ္ဘာပျက်သည့် နေ့တစ် နေ့ပင်တည်း…။
ဟို ၂၅ ဩဂုတ် ရက်ဆိုးဟာ
နှစ် သာကုန်နေ စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့
Editarór basá Rohingya Kavya (5) wá
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှသည် ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဆရာများသို့ အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခြင်း
Editarór basá Rohingya Kavya (5) wá Ogós Mac, 2021 Maiya Niyóllé Górtti - Ayat Ullah (Thai Kyaw) Mukót sónaka uñrót roñg di Maiya zargói gorttún niyoli Maa-bafefusár gorer Horé zoór eén háñzi-fiñdí Hamezomór juwab géñth gorí. Rastattún zargói áñçi Burkhá ...
Editor’s Choice Best5English Poems
Sep 11, 2021 AGR Monthly top poems, Uncategorized
Editor’s Choice Best (5) English Poems August, 2021. My Land - Kaladan Star My land_ That illuminates in fascination, With the outstanding beauty of nature, Its beauties are so magnificent, Akin to the lyrics of an ideal versifier, Which spits up different ...
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ်၊ဇူလိုင်လ ၊ ၂၀၂၁ ။
Aug 13, 2021 AGR Monthly top poems
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ်၊ဇူလိုင်လ ၊ ၂၀၂၁ ။ အလင်းမရှိတဲ့ ငါ့ရဲ့ ကမ္ဘာ ရေး- Asmah ( Moe Moe ) လူ့ရွာလောက လူ့ဘဝက တိုလည်းမတို ရှည်လည်းမရှည် သာမန်အတိုင်းသာ ရှိလှပေစွ။ ခရီးသည်လို ဖြတ်သန်းရသည့် ငါ့ဘဝမှာ နာကျင်မှုနှင့် ပူဆွေးသောက ပြည့်နက်၏။ လွတ်လပ်ရေး၏ အဓိပ္ပါယ်ကို စာအုပ်မှာတွေ့ ဖတ်ရင်းနှင့်သာ မျက်စိကန်းလျက် ဆံပင်ဖြူ၏။ ဘဝအဆုံး ဝါကြီးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့သာ အသိပညာမဲ့ လူရူးတစ်ဦးနှယ် သေဆုံးရ၏။ ရွှေထက်မြတ်နိုး အချိန်သည်ကား မြေလိုတန်ဖိုးမရှိ ငါ့အတွက်သာ။ နေရာတိုင်းက အကျဉ်းထောင်လို ဘယ်ကိုသွားသွား ခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ တစ်ဘဝဝယ် တစ်ခါ တွေ့ကြုံရသည့် သည်လောကဟာ လမဲ့နေမဲ့ နေ့ညနှင့်သာ အလင်းမရှိတဲ့ ငါ့ရဲ့ကမ္ဘာ။ သုံးနေ့တာခရီး ရေး- ...